Kombaresarada Bedelida Filter Oil iyo Dayactirka - Airpull (Shanghai) Sifeey Co., Ltd
Air kombaresarada Safayn
Air kombaresarada Lubircant
Ka dib-daweynta Qalabka Tifaftirayaasha Air
Dessicant Air qalajiyaha
Qaboojiye Air qalajiyaha
Air kombaresarada Sifeey Cunsurka
Dayactirka Filter Air
Xulashada Filter Air
Air Oil SEPARATOR Hab-Operation Bedelida
Nadiifinta Habka of Filter Air kombaresarada Oil
Kombaresarada Bedelida Filter Oil iyo Dayactirka
Sida Loo Doorto Filter Oil
Ingersoll Rand Air kombaresarada Filter Dayactirka
Performance Index of Air kombaresarada Air Filers
Taxadarka of Air kombaresarada Air Oil SEPARATOR
ciidda ku jira hawada nuugo in filter hawada la hadhay doonaa. Si looga hortago kombaresarada hawada fur ka abraded ama SEPARATOR saliid hawada ka hor istaagay ka, element filter u baahan yahay nadiifinta ama badal ka dib markii la isticmaalo 500hours. In deegaanka codsiga halkaas oo ciidda culus ka jirto, waxa aad u baahan tahay in ay soo gaabin wareegga bedelka. Jooji mishiinka ka hor bedelka filter ah. Ujeedada yareeyo waqtiga stop ah, filter cusub ama filter a nadiifiyaa firaaqada waxaa lagu talinayaa.
1. Wax yar ka jaftaa labada daraf oo filter ka dhanka ah dusha a flat, si ay u takhaluso inta badan, ciidda qallalan u culus.
2. Isticmaal hawada qalalan ee hoos ku 0.28Mpa inay afuufaan ka dhanka ah jihada of nuugid hawada. Masaafada u dhaxaysa ku biiyaha iyo warqad duubnaadaan waa inuu ugu yaraan 25 mm. Oo isticmaali biiyaha in ay kor iyo hoos u afuufaan oo ay la socdaan sarajooggiisuna.
3. Ka dib markii hubin, waa in aad iska tuur element filter haddii ay wax godad, dhaawac, ama u khafiif ah.
1. wareeji off filter kombaresarada hawada saliidda, iyo iska tuur.
2. si taxadar leh u nadiifi qolof filter ah.
3. Hubi waxqabadka unit kala duwan diraha cadaadiska.
4. saliidayn filter ka dhagixiina way goomahooda saliid.
5. Ku marooji element filter si goomahooda quwad ah, ka dibna waa inaad gacanta u isticmaalaan in ay si adag u xidh xir.
6. Hubi in ay jirto baxsiga kasta marka aad bilowday mishiinka. Attention: Kaliya marka kombaresarada hawada la joojiyay iyo ma jiraan wax cadaadis nidaamka, in aad bedeli kartaa element filter ah. Intaa waxaa dheer, iska ilaali dhaawac weyni uu keeno saliid kulul.